तपाईंले बेस्सरी टाउको दुख्ने माइग्रेन रोगका बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको होला । विश्वभरिमा एक अर्ब व्यक्ति माइग्रेनबाट ग्रस्त छन् । कुनै माइग्रेनमा हल्का मात्र टाउको दुख्छ भने कुनै माइग्रेनमा चाहिँ टाउको फुट्ला झैं गरी दुख्छ ।
एकाबिहानै कफी पिउनुहुन्छ ? थाहा पाइराख्नुस् यी ५ असर
मुटु रोगबाट बच्न चपाउनुस् तुलसीको पात।
के तपाईंले यस्तो आलु खाने गर्नु भएको छ ? विष खाए ...
घरिघरि बिरामी पर्नु हुन्छ ? यो कुरा खान थाल्नुस्
पुल निर्माणअघि बढेसँगै समृद्धि र विकासको आशा
विप्लवका टीकापुर नगर एरिया इन्चार्जसहित ३ कार्यकर्ता पक्राउ
धीरजको पहिचानमा बुद्ध जन्मभूमिको सन्देश
पैसा कमाउन मलेसिया गएका १९ नेपालीको शव आउँदा आफन्तहरू शोकाकुल [फोटोफिचर]
बुटवलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन गर्ने, नेता ज्ञवाली भन्छन् : ओली गणतन्त्रवादी पनि होइनन्
पत्नी अर्कैसँग ‘पोइल’ गएपछि मलेसियामा उड्यो मिलनको प्राण, शव आउँदा शोक